﻿ ‘सञ्जय होटल तीन पुस्ताले चलाइसकेका छौं, अझैं नयाँ पन दिँदैछौं’
रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित न्यू सञ्जय होटल तीन पुस्तादेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । हामीले यस होटलको निरन्तरता र विषेशता बारे सञ्चालक सञ्जय रौनियारसँग केही कुरा बुझन खोजेका छौं । आउनुहोस् हेरौँ न्युजलयका लागि ज्योति पोख्रेलले गरेका कुराकानीः
आजभोलि आफ्नो व्यापार, व्यवसायमा नै व्यस्त रहेको छु ।
हामीले सञ्चालन गर्दै आएको होटल व्यवसाय हाम्रो हजुरबुबाले सुरुवात गर्नु भएको हो । उहाँले करिब २०१८/०१९ सालमा पकलीबाट झुम्कामा बसाइ सरेर २०२४ सालबाट होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएको हो । हजुरबुबाले सञ्चालन गर्दै गर्दा बीचमा छुटी सकेपछि पुनः २०२८ सालमा मेरो बुबाले न्यु सञ्जय होटलको सुरुवात गर्नु भएको हो ।
लगभग २५ वर्ष अगाडिबाट मैले यो जिम्मेवारी लिएको हुँ । त्यति बेलाको समयमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा निक्कै असहज भएको थियो । ती असहजताको बीचमा बेकारमा यो व्यवसायमा फसियो कि भन्ने निराशाजनक सोचहरु पैदा भएका थिए । मेरो अवस्था बाल्यकाल भएर पनि होला । तथापी त्यसैमा रमाउँदै अघि बढ्ने क्रममा यो अवस्थामा आइपुग्दा राम्रै भएको छ । जे होस् सन्तुष्ट छु ।
कति वर्षको उमेरदेखि व्यवसायमा लाग्नु भयो ?
मैले २२ वर्षको उमेर हुँदा देखि यो व्यवसाय सम्हालेको छु ।
अहिले १२/१४ जना कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरु सम्पूर्णलाई रोजगार दिएका छौं ।
मैले होटल विशेष केही अध्ययन गरेको छैन । मैले होटलको जिम्मेवारी लिनु भन्दा अगाडी बुबाले सञ्चालन गर्नु भएको हो । त्यति बेलाको परिस्थिति नै त्यस्तै थियो । जुन मैले आफ्नो पढाइ लेखाइ छाडेर होटल व्यवसाय सम्हाल्न परेको पर्यो । त्यतिबेला पनि पढाइ लेखाइ आफ्नो ठाउँमा थियो तर यो सम्बन्धि कुनै अध्ययन नभए पनि आफ्नो अनुभवको आधारमा साथै बाहिरको माहोललाई बुझेर यो व्यवसाय सुरुवात गरेको हो । यसरी संघर्ष गरेर हालको स्थितिमा आउन सकेको छु ।
तपाई साहित्यमा रुचि राख्ने हुनुहुन्छ । साहित्य लेखनमा लागि परेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?
वास्तवमा साहित्य एक पाटो हो । व्यवसाय अर्को पाटो हो । होटल व्यवसाय मेरो पुर्ख्यौली व्यवसाय हो । हाम्रो तीन पुस्ता देखि सञ्चालनमा रहेको होटलको इतिहास ४९ वर्षको छ । अर्को कुरा साहित्य भनेको त्यही क्षेत्रमा क्रियाशिल नभए पनि मनमा लागेका कुरा तथा समाजमा घटेका घटना परी घटनाहरुलाई लेख्न थालेको हुँ । लेख्ने क्रममा आफूलाई राम्रो लागेको रचना डायरीमा नोट गर्ने गरेको छु । केही कविताका संग्रहहरु छन् । जुन मैले आफ्नो रहरले लेख्न थालेको हो । साहित्य क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने जहाँ सम्म मेरो इच्छा थिएन । बहिनी लगायत अन्य शुभ चिन्तक साथीहरुले पनि तपाई राम्रो लेख्नु हुन्छ, साहित्य क्षेत्रमा केही गर्न सक्नु हुनेछ भनेर अहिले पनि भनि रहेका छन् । त्यस अर्थमा उहाँहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
साहित्य लेखनको क्रममा कुनै मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ कि लेख्ने मात्र गर्नु हुन्छ ?
हाम्रो रामधुनीमा साहित्यिक सञ्जाल गठन भएको छ । त्यसको नेतृत्वमा रोमु अधिकारी दाइ हुनुहुन्छ । मैले फेसबुकमा केही कविता सार्वजनिक गर्ने गरेको छु । त्यसलाई देखेर नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति सुदिव भाइले मेरो कविता प्रति सकारात्मक प्रतिकृया दिने गर्नु भएको छ । अन्य साथीभाइले पनि कार्यक्रममा आउनुहोस् भनेर हौसला प्रदान गर्नु भएकै हो । त्यसमा सहभागी हुन गएको छैन । भर्खरै मात्र रामधुनीका मेयर साबहरु, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा जेष्ठ नागरिक हलमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो । त्यसमा पनि पछि मात्रै थाहा पाएँ । बाकी दिनहरुमा उपस्थिति हुनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । हेरौं उहाँहरुको माया, साथीभाइहरुको माया पाइराखे प्रस्तुतिका लागि जान पनि सक्छु ।
अन्य संघ संस्थामा पनि आवद्ध रहेको छु । जस्तै रामधुनी वाणीखण्डी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिको आजिवन सदस्यमा छु । रामधुनी–५ मा अवस्थित जनभावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य र ऋण समिति संयोजक पनि छु । तरहरा कामदेवी दुध तथा सहकारी संस्था, कामधुन उद्योग दुध तथा डेरी संस्था, इटहरीमा रहेको मेघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कृषी सहकारी पकलीको सदस्य छु । सगुन कृषि सहकारीको शेयर सदस्य छु । मान्छेले कमाइ गरिसकेपछि केही केही सामाजिक क्षेत्रमा पनि योगदान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पैसा नै सबै थोक होइन तर जहाँ वृद्धवृद्धा, गरीब, दीन दुःखीलाई सहयोग गर्ने मौका पाइन्छ त्यसको छुट्टै आनन्द मिल्छ ।
आफ्नो खर्च कटाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर पनि आफ्नो मेहनत अनुसार सन्तुष्ट नै रहेको छु । घर परिवारको जिम्मेवारी बोकेर पनि यत्तिको गरिरहेको छु । सबैको साथ र माया पाएको छु, त्यसैले पनि खुसी छु ।
भविष्यमा यही सञ्जय होटललाई व्यवस्थित बनाउने या अरु केही गर्ने योजना छ ?
धेरै पहिला नै सञ्जय होटलको नामलाई न्यू सञ्जय होटलको रुपमा रुपान्तरण गरेका हौं । हिजोको परिस्थिति र हाल बजारमा रहेको परिस्थिति छुट्टै छ । अहिलेको परिस्थिति अनुसार हाम्रो होटल सञ्चालनमा रहेको छ । तर निकट भविष्यमा रामधुनीको सेरोफेरोमा राम्रो होटल खड्किदै गएको महसुस भएको छ । त्यो अवस्था हुन नदिनका लागि हामीले होटललाई व्यवस्थित गरेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुको रुचि अनुसार आगामी दिनहरुमा राम्रो व्यवस्थापन गरेर केही नयाँपन प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
रामधुनीमा धेरै होटलहरु रहेका छन् तर न्यु सञ्जय होटल नै किन आउने ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सफाइ हो । यहाँ कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो नियम अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । उहाँहरुको समेत सरसफाईमा निगरानी हुनुका साथै किचनहरु व्यवस्थित बनाएका छौं । किनभने हाम्रो किचन छुट्टै छ । ट्वाइलेट वाथरुम छुट्टाछुट्टै रहेका छन् । त्यसले गर्दा फोहोरमैला न्युन हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको मान्छेमा भएका व्यवहारिक गुण हो । मेरो लागि ग्राहकहरु साथी सरह हुने गर्छन् । ग्राहकबीच हाम्रो सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो होस् भन्ने मेरो चाहना छ । त्यसका साथै उहाँहरुले म लगायत न्यु सञ्जय होटललाई रुचाउनु हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
व्यवसाय गर्दा आएका समस्या र चुनौतीहरुलाई कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?
मैले हाटल सम्हाली सकेपछि सम्पूर्ण कार्यभारको जिम्मेवारी लिएँ । त्यतिखेर धेरै चुनौतीहरु आए । त्यो बेला बेकारमा होटल व्यवसाय सम्हालेछु, मलाई होटल व्यवसाय गर्नु छैन भन्ने भित्री आक्रोस हुन्थ्यो । कहिलेकाही यसबाट निक्कै दिक्क लाग्ने गथ्र्यो । बाल्यकालको अवस्थामा भएरपनि होला कतिपय बेला रुनुपर्ने अवस्थाहरु समेत आए । मेरो पढाइ पनि राम्रै चलिरहेको थियो । म सँगैका साथीहरु अहिले डक्टर, इन्जिनियर भएका छन् । त्यो बेला मेरो बाध्यता थियो । बुबाको जेठो छोरो भएको कारण पनि स्कुल छाडेर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । समय र परिस्थितिले होटल व्यवसायमा होमिन बाध्य बनाएको हो । जब मैले होटल सञ्चालनबारे सिक्दै गएँ, बुझ्दै गएँ त्यसपछि मलाई खुसी मिल्दै गयो । मेहनत गरे अनुसार फल आउँदैछ भन्ने लाग्यो । समग्र परिवारको साथ सहयोगले गर्दा म यो व्यवसायमा भिजी सकें । यहाँसम्म आइपुग्नको लागि मेरा सम्पूर्ण परिवार, इष्टमित्र, हितेसी प्यारा साथीभाइहरुको साथ सहयोगले गर्दा सफल भएको हो । आगामी दिनमा पनि मलाई सम्पूर्णको साथ सहयोग चाहिन्छ । सबैको साथ सहयोग मिल्दै गएछ भने यो भन्दा उत्कृट केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल छ ।
आफ्ना ग्राहकहरुमा सर्वप्रथम विजय दशमी, शुभ दिपावली तथा छठ पर्व २०७७ को शुभ अवसरमा सम्पूर्ण व्यवसायिक मित्र, सुभचिन्तक, वुद्धिजिवी तथा इष्टमित्र लगायत नेपाली जनसमुदायमा सुस्वास्थ्य एवमं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हाल विश्व माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौं । त्यसकारण सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुमा सामाजिक दुरीको पालना, माक्सको प्रयोग, भिडभाडमा नजान आग्रह गर्छु । साथै आफूपनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं भन्ने अनुरोध गर्दै सम्पूर्णबाट मायाप्रेम, सल्लाहसुझावको आशा गर्दछु ।
ARUN KUMAR SAHलेख्नुहुन्छ
आपकी अन्तर्वार्ता पढ़ा मन को अच्छा लगा! आपकी बात लोगों को प्रेरित करेगी ऐसा मेरा विश्वास है! आगे भी अपने मृदुल ब्यवहार से ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब होंगे! मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है! धन्यवाद! 🙏